Isicelo Isandiso-Ukulingisa - Digital Ukukhiqiza Co., Ltd.
kuqinisa ukuphrinta 3D ekubunjweni incustry
3D zokunyathelisa has a isivinini inzuzo sobala kakhulu ekukhiqizeni encane batch, futhi kunezinzuzo sobala sokuthuthukisa uhlobo oluthile imisebenzi enjengokwakha yezimoto, Aerospace, zezindiza, ezempi, isitimela, isithuthuthu, umkhumbi, imishini mechanical, futha amanzi, umkhakha Ceramic , njll
Tinhlobo letehlukene imikhiqizo asakazwe yendabuko kunzima ukukhiqiza kungenziwa kuphela ezivezwa 3D zokunyathelisa ezifana 0.5mm ophephela izindwani, uwoyela amavesi ahlukahlukene Ukupholisa kwangaphakathi, futhi Castings ahlukahlukene ikhipha eziyinkimbinkimbi. La makhasimende chithi emhlabeni wonke.
Ukuze art izingcezu, izinhlobo ezahlukene isikhunta for ekukhiqizweni kungabuye kabanzi.
Kususelwa isicelo RP ubuchwepheshe, entsha umugqa zokuthuthukisa umkhiqizo, eyayisebenzisa RTV Silicon Rubber babumba futhi Umshini Ukulingisa, manje kabanzi isetshenziswa emkhakheni imoto, electronic futhi njll yezokwelapha
RIM: okuphansi-ingcindezi ukuphendula umjovo udini (Epoxy udini)
RIM kuyinqubo entsha isetshenziswa ukukhiqizwa emaceleni okusheshayo. Kuyinto ingxube ezimbili ingxenye polyurethane izinto, okuyinto injected efolomeni okusheshayo ngaphansi lokushisa evamile futhi ingcindezi ongaphakeme, futhi ezakhiwe yezinqubo zamakhemikhali ngokomzimba ezifana polymerization, crosslinking futhi solidification materials.
It has izinzuzo ukusebenza kahle eliphezulu, okufutshane umjikelezo zokukhiqiza, inqubo elula eziphansi. Kuyinto efanelekayo yabadobi ukukhiqizwa Isivivinyo enqubeni zokuthuthukisa umkhiqizo, kanye ukukhiqizwa ezincane-umthamo, isakhiwo esilula ikhava bese imikhiqizo ezinkulu thick-ngodonga futhi engalingani thick-ngodonga.
isikhunta ezisebenzayo: resin isikhunta, ABS isikhunta, aluminium ingxubevange isikhunta asakazwe impahla: ezimbili ingxenye polyurethane impahla Izakhiwo: efana PP / ABS, umkhiqizo ine anti-ukuguga, umthelela ukumelana namandla, izinga eliphakeme kufanelekile, kulayishwa lula futhi athula izici.
Isimiso zokusebenza RIM low-ingcindezi perfusion udini simiswe ngalendlela lelandzelako: i-pre-ezakhiwe ezimbili ingxenye (noma multi-ingxenye) izinto zokusetshenziswa ketshezi ezidla phakathi ikhanda kuhlangana ngokusebenzisa futha metering esikhungweni isilinganiso esithile, bese ngokuqhubekayo batheleka isikhunta ukwakha udini ukuphendula solidification. Itjhuguluko isilinganiso ibangelwa ushintsho ijubane futha, okuyinto ilawulwa inani iyunithi ukudedelwa futha kanye nesikhathi umjovo.
Carbon fibre / fibre kwagcizelela Plastics (zu) cleaner isingeniso
Isimiso esiyisisekelo yenqubo cleaner isingeniso kubhekisele ekubekeni ingilazi fibre, ingilazi fibre Indwangu, ifaka ahlukahlukene, ukukhululwa indwangu, resin ungqimba permeable, ebeka resin iphayiphi elithatha inayiloni (noma irabha, phezu belashwa gel elingenamikhono ungqimba). Silicone) ifilimu nezimo (ie isikhwama cleaner), ifilimu kanye azungeze we umgodi uvalwe uphawu.
I ingaphakathi is bashiye futhi resin is injected ngalo ingaphakathi. Umgudu udini lapho resin is elifakwe kanye ipayipi resin kanye surface fibre ngaphansi cleaner impregnate lenqwaba fibre ekamelweni lokushisa noma ngaphansi bafudumale.
Inhlanganisela 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe kanye zendabuko asakazwe ubuchwepheshe kuholele okusheshayo asakazwe ubuchwepheshe. Isimiso esiyisisekelo ukusebenzisa ubuchwepheshe ukuphrinta 3D ukuphrinta ngokuqondile noma ngokungaqondile Foam elahlekile, polyethylene isikhunta, emakhilayoni isampula, isifanekiso, isikhunta, umongo noma igobolondo ukulingiswa, bese sihlanganise bendabuko asakazwe inqubo ngokushesha cast metal izingxenye.
Inhlanganisela 3D zokunyathelisa ubuchwepheshe kanye inqubo ekubunjweni unika play okugcwele izinzuzo okusheshayo 3D zokunyathelisa, izindleko ongaphakeme, nekhono akhiqize izingxenye eziyinkimbinkimbi bese waphonsa yiluphi uhlobo zensimbi, futhi ayithinteki umumo kanye nosayizi, futhi eziphansi. inhlanganisela yabo ingasetshenziswa ukugwema ubuthakathaka, lula kakhulu futhi kunciphisa inqubo design ezinde, ukuguqulwa, kabusha ekubumbeni.
Investment asakazwe libhekisela indlela kuqhathaniswa entsha ye ekubunjweni metal, eyaziwa nangokuthi isikhunta egcwele, vaporization futhi ephonsa cavityless. I sibonelo senziwa Foam (FOAMED zepulasitiki) futhi ngokuvamile enwetshiwe polystyrene. Isikhunta omuhle lugcwele isihlabathi yabalingisi (FOVNDRY isihlabathi) ukwakha isikhunta (ISIKHUNTA SASIKHONA), kanye okufanayo isikhunta ezimbi. Lapho metal oncibilikisiwe is injected isikhunta (ie, isikhunta eyenziwe polystyrene), Foam iyasha noma kulahlwe, kokushiya isikhunta omubi isihlabathi Foundry egcwele metal esibunjiweyo. Le ndlela ekubunjweni kwaba kamuva eyamukelwa umphakathi umqophi futhi manje asetshenziswa ekukhiqizeni izinto ezimbonini.
usayizi elikhulu SL 3D iphrinta Kunconywa, ezifana 3DSL-600Hi nge Yakha ivolumu 600 * 600 * 400 mm kanye umshini ezinkulu 3DSL-800Hi nge Yakha ivolumu 800 * 600 * 550mm.